HomeတူရကီMarmara ဒေသကြီး10 BalikesirBalikesir, Manisa သမိုင်းဝင်မြေရထားကိုစေလွှတ်ခဲ့သည်
21 / 05 / 2019 Levent Elmastaş 10 Balikesir, 45 Manisa, ရထားလမ်း, လှိမ့်စတော့ရှယ်ယာ, တူရကီ Aegean ကမ်းခြေ, အထွေထွေ, စက်ခေါင်း, ခေါင်းစီးသတင်း, Marmara ဒေသကြီး, တူရကီ 0
သမိုင်းဝင်သောပြည်၌ရထားပေါ်တွင် Balikesir, Manisa ကိုစေလွှတ်ခဲ့သည်
Balıkesirဘူတာ Manisa ထံသို့စေလွှတ်အထွေထွေညွှန်ကြားမှုအားဖြင့်ပြသအင်တုံဘုံဘိုင်အတွက်လွမ်းဆွတ်ရထားလမ်းမြေယာအဖြစ်ပြ။
xnumx'l တစ်နှစ်နှင့် Balikesir Gara အင်တုံ '' က Black ရထား '' TCDD မှာပြ 1960 နှစ်ပေါင်း ပတ်သက်. နည်းပညာနှင့်အတူရုန်းကန်ဆုံးရှုံးပြီးနောက်ကားလမ်းအမှုဆောင်ခြင်း, သွန်သင် Manisa ဖှဲ့စညျးစက်မှုဇုံ, ခွင့် Manisa ရိုက်ယူခဲ့သည်ခဲ့သည်ဟူသောဝေါဟာရကိုထံသို့စေလွှတ်ခဲ့သည်။
Balıkesirရဲ့သမိုင်းဝင်မြေယာရထားမရှိတော့ပါ! အဆိုပါ 1960 နှစ်ပေါင်းBalıkesir-İzmir, (YHT မှလုပ်ကုန်တင်နှင့်လူ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဖြစ်ပေါ်နေသောနည်းပညာဒီဇယ်မီးရထားအစုံ (DMU) နဲ့အစားထိုးသည့်ရေနွေးငွေ့ခေါငျး (မြေယာရထား) ကမှတ်သားတဲ့ကာလများနှင့်မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းရထားများအကြားBalıkesirရဲ့Bandırma, Balıkesirနှင့်Kütahyaအညီ ) ထားခဲ့တယ်။
Balıkesir Balikesir ဘူတာရုံများတွင်လွမ်းဆွတ်အင်တုံဖော်ပြရန်နိုင်ရန်အတွက်နည်းပညာနှင့်အတူသူ၏အသက်တာပြီးစီးခဲ့ပြည်မှရထားသံလမ်းပေါ်တွင်ပြပွဲ point ကနေဖယ်ရှားခဲ့ပါတယ်။
Balıkesirသမိုင်းဝင်မြေယာရထားစွပ်စွဲတူရကီပြည်နယ်မီးရထားသမ္မတနိုင်ငံ (TCDD) အထွေထွေညွှန်ကြားမှု Manisa စေလွှတ်သို့မဟုတ်ချေးငွေသို့မဟုတ်လှူဒါန်းခဲ့ပြီ (OSB) တွင်ဖွဲ့စည်းထားခြင်းစက်မှုဇုံတစ်ခရိုင်မြို့တော်စည်ပင်က၏တောင်းဆိုချက်တစ်ခုဖန်ဆင်းတော်မူ၏။
နှစ်ခုလေ့လာမှုများ၏အကူအညီ TR တနင်္ဂနွေနှင့်အတူမြေယာရထားစွပ်စွဲပြီးတော့ Manisa OSB အတွက်ပြသပါလိမ့်မယ်အသစ်တခုအရပျသို့ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်။
social media တုံ့ပွနျမှုကနေ၎င်းကဂုဏ်ပြုလိုက်သည်
ဒါပေမယ့်မလိုအပ်ကြောင်းBalıkesirပေးသောရထားများ၏ပြပွဲအာကာသကနေဖယ်ထုတ်အကြီးဆုံးတုံ့ပြန်မှုနှင့်အတူစေလွှတ်တော်မူဘယ်မှာဒါမှမဟုတ်ဘာရည်ရွယ်ချက်များအတွက်မြေယာရထား Balikesir ၏။ အာဏာရပါတီသည်အဖြစ်အပျက် Balikesir လက်ထောက်သတိထားမဟုတ်ခဲ့ဟူမူကား, Balıkesirliပင်နောက်ထပ်လူမှုမီဒီယာထဲက AK ပါတီ Balikesir လွှတ်တော်အမတ်များကစွပ်စွဲဒီနေ့ရဲ့ထိရောက်မှုအရှိဆုံး tool ကိုအတော်များများဟာပြည်မှရထားထံသို့လာကြပါပြီ။
ဆုံးရှုံးထက်နိုင်ငံသားများ Balikesir ခြင်းဖြင့်ကြုံတွေ့ဖြစ်ရပ်နှင့်အတူသမိုင်းတစ်အပိုင်းအစ, တူရကီအတွက်နိုင်ငံရေးအာဏာလည်းတစ်ဖန်ပြန်လည်ရှင်းလင်းစွာသရုပ်ပြခဲ့သည်။ (İlkanမြေ - အဆိုပါ Yenihabergazete)
Sarcophagus Tomb Manisa မြန်နှုန်းရထားလေ့လာမှုအတွက်ပြီးပြီပျေါထှနျးခဲ့
Alanya Gedevet လမ်းကို Maintenance
Manisa နှင့်Balıkesir, Manisa, Uşak, လျှပ်စစ်အလုပ်လုပ်တင်ဒါရလဒ်များ၏ Denizli Alsancak-Making လိုင်း
TCDD Kayaş - Cetinkaya လျှပ်စစ်ဓာတ်အားစီမံကိန်းနည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များပစ္စည်းဌာနနှင့်သမ္မတထံသို့စေလွှတ်
DLH Bursa ပန်းပု-ဂိုဒေါင်လမ်းရထားလိုင်းကိုခွင့်ပြုချက်များအတွက်အထွေထွေညွှန်ကြားမှုထံသို့စေလွှတ်ခဲ့သည်